Myanmar Daily Mail: August 2013
Re: [Jeffylin916] ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း လုပ်ခဲ့သည့် ဥပဒေ (ရွှေကူမေနှင်း)
2013/8/12 မီးပြတိုက် <noreply@mee-pya-tite.com>
''ငါ့ကို ဘယ်သူက ခိုင်းလို့ရမှာလဲကွ၊ ငါက ဘယ်သူခိုင်းတာကို လုပ်ရမှာလဲ''
သင်သည် Jeffylin916 Group ဧ။် member တစ်ယောက်ဖြစ်သောကြောင့် ယခု mail ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ဧ။် mail များကိုဖြန့်ဝေချင်ပါက jeffylin916@googlegroups.com သို့ပို့နိုင်ပါသည်။ group ကိုဝင်ချင်ပါက jeffylin916+subscribe@googlegroups.com သို့ mail ပို့ ခြင်းဖြင့် ၀င်နိုင်ပါတယ်။ group မှထွက်ချင်ပါက jeffylin916+unsubscribe@googlegroups.com ဖြင့်ထွက်နိုင်ပါတယ်။
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Jeffylin916" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to jeffylin916+unsubscribe@googlegroups.com.
Re: [paowyne:3020] ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း လုပ်ခဲ့သည့် ဥပဒေ (ရွှေကူမေနှင်း)
On 13 Aug, 2013, at 12:22 AM, မီးပြတိုက် <noreply@mee-pya-tite.com> wrote:
ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း လုပ်ခဲ့သည့် ဥပဒေ (ရွှေကူမေနှင်း)
Re: [Jeffylin916] ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း လုပ်ခဲ့သည့်...
Re: [paowyne:3020] ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း လုပ်ခဲ့သည့...
ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း လုပ်ခဲ့သည့် ဥပဒေ (ရွှေကူမေနှင်...